भुमाफिया विरुद्व नुनिया समाज सडकमा कडा विरोध गर्दै जिप्रका धनुषा घेराउ (फोटो/भिडियो)
जनकपुरधाम, असार ९ गते : जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ स्थित नुनिया कुट्टी तोडफोड गरि व्यक्तीगत रुपमा जमिन कब्जा गर्न थालेपछि नुनिया समाज कडा विरोध गर्न थालेका छन् । महाविरचौक नजिक संकटमोचन विद्यालय जाने वाटोमा कुट्टीको मन्दिर तोडफोडको विरोधमा स्थानियवासी र समाजका साथै साधु सन्तहरु समेत सडमा आर्लिएका छन् ।
दशकौं देखि रहेको हनुमान (महाविर) मन्दिर तोडफोड गरि व्यक्तिगत रुपमा जमिन कब्जा गरेको विरोधमा कुट्टीवाट आज समाज र साधुसन्तको विरोध जुलुस निकालिएर नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ तथा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका थिए । तर प्रहरीले अवरोध गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि केहि वेर तनाव समेत उत्पन्न भएको थियो । प्रहरीले अवरोध र केहि साधुसन्तलाई धक्का दिएपछि प्रदर्शनकारीहरु सिडियो कार्यालयमै पत्थरवाजी सुरु गरेका थिए ।
जमिन कब्जा तत्काल नरोकिए र मन्दिर पुर्ननिर्माण तथा क्षतीपुर्ती नदिए देशभरिकै नुनिया समाज आन्दोलनमा जाने समाजको चेतावनी छ । नुनिया समाज विकास परिषद नेपालको अगुवाईमा देशभरि भुमाफिया विरुद्व आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । उनीहरुका अनुसार प्रहरी समेतको मिलिभगतमा वडा नं. ५ निवासी प्रेमबाबु साहले सो जमिनमा घर ठडयाउन लागि परेपछि स्थानियले विरोध गर्दै आएका छन् । वर्षौ वर्ष देखि कट्टीको भोगचलनमा रहेको जमिन कब्जा गर्न चाहँदा आफुहरु विरोध गरेको समेत उनीहरुको भनाई छ ।